हिन्दुधर्ममाथि सांसद गिरीले गरे यतिठूलो अपमान, छालाकै जुत्तासँग गरे भवनको शिलान्यास (भिडियो सहित) – Samachar Pati
हिन्दुधर्ममाथि सांसद गिरीले गरे यतिठूलो अपमान, छालाकै जुत्तासँग गरे भवनको शिलान्यास (भिडियो सहित)
पर्वत, १४ असार । नेकपा पर्वतका प्रतिनिधि सभाका सांसद पदम गिरीले हिन्दहरुधर्ममाथि ठाडो प्रहार गरेका छन् । बुधबार खानेपानी भवनको शिलान्यास गर्नको लागि वारी बेनी माझफाँट पुगेका सांसद गिरीले हिन्दुधर्म माथिनै अपमान हुने हर्कत देखाएका हुन् ।
भवनको शिलान्यास गर्नेक्रममा उनी जुत्ता सहित सहभागी भए । हिन्दु धर्म परम्परा अनुसार यस्तो पूजाआजमा छालाका कुनै पनि बस्तु धारणा गर्न हुदैन र चोखो निष्ट हुनुपर्छ भन्ने प्रचलन छ तर उनले हिलोबाट आफूलाइ जोगाउनको लागि छालाका जुत्तासँगै शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन् ।
हिन्दुधर्मको अपमाननै हुने गरी सांसद गिरीले देखाएको हर्कतको अहिले सामाजिक संजामा निकै भाइरल भएको छ । उनले देखाएको हिन्दुत्व माथिको अपमान ८५ प्रतिशत हिन्दुबादीहरुको रगतनै तान्ने खालको देखिएको छ । उनलको यो हर्कतको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।
केहि दिन अगाडि संसदमा बजेट बारे बोल्ने क्रममा अनाबृष्टि, अल्पबृष्टि, अतिबृष्टिका कुरा उठाएका सांसद गिरीलाइ अब भने आलोचनाका अतिबृष्टि हुने सम्भावना बढेको छ ।
न्युज बनाउने क्रममा रविलाई पहिलोचोटी आयो यस्तो धम्की, लाइभ भिडियोमै हात जोडेर यस्तो भने रविले
घरमा नै पुगेर सबिता मातालाई मार्ने धम्की दिने युवक को हुन् ! माताले प्रहरी चौकीमा पुगीन् गरिन् यस्तो विन्ती (भिडियो)
डम्मरुको डन्डीबियो !! भिडियो सहित